Izinkinga zesifo sikashukela nokuthi wehlisa kanjani ushukela wegazi > Ukwelashwa nokuvimbela
Izinkinga zesifo sikashukela nokuthi wehlisa kanjani ushukela wegazi
Kanye nemivimbo kanye nokuhlaselwa yisifo senhliziyo, isifo sikashukela sithathwa njengesifo esibi kakhulu esingaqeda ubuntu. Ngempela, cishe isigamu sabantu bomhlaba sinokuxilongwa noma ukuthambekela kwalesi sifo. Ingozi ukuthi ushukela omningi egazini lomuntu ufaka isandla ekubhujisweni komzimba wakhe. Ngakho-ke, ukugcina ukulingana kwe-glucose efanelekile kithi sonke.
Iziguli ezinesifo sikashukela zingaphansi kokuqashwa njalo kodokotela. Kumele, ngokuphepha kwabo, bahambisane nezincomo ezibekwe ochwepheshe mayelana nokudla nempilo yonke. Kepha uma inkinga yayo ingenamandla kangako futhi kudingekile kuphela ukugcina izinga likashukela ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile, ungaphendukela emithini yendabuko, enikeza inani elanele lokupheka elingalungisa amazinga kashukela.
Kodwa-ke, kufanele ufunde le nkinga ngemininingwane eminingi.
Izimpawu zokuqala lapho isigaba sokuqala sesi sifo sinqunywayilezi:
umlomo owomile njalo nokoma okungachazwanga,
isifiso esijulile sokuchama kwesinye isikhathi kanye nesinye,
isikhumba esikhanyayo nobunzima bokuphulukisa ukuklwebheka okuncane,
Konke lokhu kungakhombisa ukuthi unoshukela wegazi ophakeme.
Kuyingozi kangakanani ukuba noshukela omningi?
Ake siqale ngokuthi empeleni umzimba wethu udinga ushukelaukuze kusebenza kahle. Lapho esegazini, lo mkhiqizo uhlukaniswe izakhi ezimbili: ushukela kanye ne-fructose. Ngokweqile, ushukela uqala ukuguqula ube yi-glycogen, ehlala ezinhlinini nasezibindini. Lapho nje izinga likashukela lehlile, le nto iphinde iguqulwe ibe ushukela bese isetshenziswa ngumzimba ngenhloso eyayihlosile.
Naphezu kweqiniso lokuthi ushukela wenziwe ngezinto zokwakha, kodwa awunantengo yokuthola umkhondo namavithamini awusizo. Kuyiqiniso, umzimba udinga amanani amancane eglucose, kepha ukweqisa kwakhe kuthuthukisa ukugcwala kwezixuku zonke zezifo, ezinjengesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, isifo sokuqina kwemizwa, nabanye abaningi.
Izinhlobo zesifo sikashukela
Kunezinhlobo ezimbili zezifo zesifo: othembekile futhi ozimele we-insulin. Futhi yize izimpawu ezisemqoka kuzo zombili lezi zimo ziyefana, isifo ngasinye sihamba ngendlela yaso:
Isifo sikashukela sohlobo 1 sivele ngokuzumayo bese sikhula ngokushesha.
Isifo sohlobo lwesibili ezigabeni zokuqala kunzima kakhulu ukusibona, ngoba izimpawu zalo zifiphele.
Uhlobo lokuqala lwesifo sikashukela kungenxa yokuthi ama-carbohydrate adakwe ngokudla akhulisa ushukela wegazi ngendlela ephakeme. Ukwenza isimo sibe ngokwejwayelekile, i-insulin iyadingeka.
Izimpawu zenkathi yesifo sikashukela esingancikile i-insulin yilezi:
Ukukhathala nobuthakathaka besiguli.
Ukwehla kwesisindo nokumelana okuphansi kwamagciwane.
Ukuvela kwamanxeba anciphayo okunzima ukwelapha.
Ohlelweni lwesibili sikashukela, umuntu unomuzwa ophansi we-insulin. Njengomthetho, abantu abanjalo banothile. Ezimweni eziningi, lesi yisifo esenzelwa ifa, nezici ezingezinhle ngesimo sokuxineka okukhulu, ukuphazamiseka kwehomoni, noma ukutheleleka emzimbeni kukhulisa isimo sesiguli.
Ingozi yalolu hlobo lwesifo ilele eqinisweni lokuthi, njengomthetho, sitholakala esigabeni esibi sesifundo salo.
Isifo sikashukela sidinga ukubhekwa njalo kwesiguli. Konke ukwelashwa, kufaka phakathi izidakamizwa kufanele kunqunywe ochwepheshe. Lokhu kungenxa yokungabonakali kwesifo okucashile, okunika izinkinga ezinkambisweni eziningi zezitho zomuntu, kufaka phakathi okubukwayo nokwesaba.
Ukunqunywa koshukela wegazi
Ngesikhathi sokucwaninga ososayensi basungula amazinga eglucose wegazi. Bahlukile kubantu bemikhakha ethile yobudala, kepha abazimele ngokuphelele ebulilini babo.
Ithebula lokuqhathanisa lisuselwa ekunqumeni izinga loshukela egazini elithathwe esiswini esingenalutho. Inkomba ejwayelekile yi (ku-mmol / l):
ezinganeni ezisukela ku-2.8 kuya ku-4,4,
kubantu kusuka kwabaneminyaka yobudala engamashumi ayisithupha, ukusuka ku-3.2 kuye ku-5.5,
kubantu abadala kusuka ku-4.6 kuye ku-6.7.
Masinyane ngemuva kokudla, izinga likashukela likhuphukela kumayunithi angama-7,8 noma ayi-8. Lokhu kweqa kwesikhashana akubhekwa njengokuphambuka, kungakhuphuka bese kuncipha.
Ukukhulelwa nakho kudala ukukhuphuka okuthe xaxa kweglucose. Kodwa-ke, ngemuva kokuzalwa kwengane, izinkomba zibuyele kokujwayelekile.
Ungawehlisa kanjani ushukela
Uma unoshukela wegazi ophakeme, kufanele uhlale wazi ukuthi wehlisela kanjani le nkomba. Okokuqala, kuyadingeka Namathela ekudleni okuqinile, ebheka zonke izici zomzimba wakho.
Abaningi bakholelwa ukuthi kuyadingeka ukukhipha ngokuphelele amaswidi. Kepha sidinga inani elithile likashukela ukuze siphile ngendlela ejwayelekile. Ngakho-ke, ochwepheshe baluleka ukubuyisela ushukela ojwayelekile ngemikhiqizo yemvelo efana noju, izaqathe, amagilebhisi nabanye. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuqinisekisa ukuthi umzimba uthola wonke amaminerali namavithamini adingekayo kuwo.
Kwezinye izimo, iziguli ezinesisindo somzimba esinconywayo zinconywa ukuthi zithathe ushukela ngemithi ekhethekile, efana i-aspartame, i-xylitol noma i-saccharin.
Kukholelwa ukuthi azinawo amakhalori, futhi adonswa ngokuphelele ngumzimba ngaphandle kokuzilimaza. Kepha lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Isibonelo, ukusetshenziswa isikhathi eside kwe-xylitol kungaholela ekuphazanyisweni kwesibindi namathumbu, njalonjalo. Ngakho-ke, ukungena kwezimali ezinjalo kufanele kulawulwe ngokuqinile.
Lapho wenza uhlelo lokudla okunempilo lwesiguli sikashukela, ukudla okuqukethe i-carbohydrate ephezulu kufanele kungafakwa ekudleni kwakhe. Isisekelo sokudla okunjalo yizinto ezivumayo sindisa ushukela wegazi. Lokhu kufaka phakathi:
Izinhlobo ezahlukahlukene zezithelo zamawolintshi.
Imifino eluhlaza kanye nemifino.
I-Jerusalem artichoke, equkethe inani elikhulu le-insulin yemifino.
I-Turnip kanye negalikhi.
Zonke izinhlobo zezinongo.
Izinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle.
Izinga lokusebenzisa lemikhiqizo neminye kufanele libhekwe ngokuqukethwe kwabo kilojoule.
Njengoba iziphuzo zinconyelwe itiye eliluhlaza nelamakhambi, kanye ne-chicory.
Izitsha kufanele zibambe futhi ziphinde zibiliswe noma zitholwe ngenani elincane lamafutha. Ukudla okunezithelo okungenani izikhathi ezinhlanu ngosuku.
Kukhishwe ngokuphelele ekudleni:
Inyama nenhlanzi yezinhlobo ezinamafutha, kanye nemikhiqizo evela kubo.
Ukudla okungahlanganisiwe nokubhema inyama.
Imikhiqizo enobisi olunamafutha aphezulu nemikhiqizo yobisi.
Zonke izinhlobo zikhuhla kanye ukhukhamba.
Iziphuzo ezimnandi namakhekhe.
Umzimba wesifo sikashukela udinga i-zinc, enamanani amaningi aqukethe ukukhula kwengqolowa kanye nemvubelo ye-burwer's. Kepha isinkwa esimhlophe, kunalokho, sinciphisa inani lale nto emzimbeni. Konke lokhu kumele kubhekwe ukuze uqonde ukuthi wehlisa kanjani ushukela wegazi.
Kwasungulwa ngokokuhlola ukuthi ukusetshenziswa kabi kokudla okumnandi nokunesitashi kubangela ukwanda okukhulu kwamazinga kashukela futhi kunqume isidingo sotshwala. Vele, kuleli cala, i-vodka iyisidingo esiyisisekelo somuntu ogulayo kuphela, kepha ukuze uyiqede udinga ukwenza konke ukutuswa odokotela futhi bangaphambuki emithethweni.
Ukusetshenziswa kwamakhambi abantu
Esigabeni sokuqala sesi sifo, i-infusions ekhethekile yesifo sikashukela namakhambi kanye namajikijolo ingasetshenziswa njengomuthi. Bazosiza ukuguqula ushukela bese bahlanza negazi.
Lawa makhambi afaka:
i-nettle, nezinye izitshalo eziningi.
Izindlela zokwenza ama-decoctions kanye netiye zingatholakala ezincwadini noma ezingosini ze-Intanethi. Ngamunye wabo uzokusiza ususe ushukela owedlulele ezimpawu zokuqala zalesi sifo.
Ngaphezu kwalokho, ungangehlisa ushukela, ukukhulisa umsebenzi wakho womzimba. Ngemuva kwakho konke, kuye kwafakazelwa ukuthi imidlalo yama-amateur yehlisa amazinga kashukela. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukushiswa yilanga futhi uphuze amanzi amaningi. Vele, lokhu kufanele kube ngamanzi amaminerali noma i-decoction ekhethekile. Konke lokhu kuzosiza ukugcwalisa izicubu nge-oxygen, kuvuselele inqubo yokushisa amafutha.
Kuyadingeka ukuthi uqinisekise ukuthi imithwalo iba njalo, kepha isiguli akufanele sisebenze kakhulu. Ngemuva kwakho konke lokhu, kungaletha ukulimala kuphela. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala amakilasi, udinga ukubonana nodokotela wakho.
Indlela yokunciphisa ushukela ngokushesha
Isifo sikashukela mellitus - Lesi yisifo esiyinkimbinkimbi sohlelo lwe-endocrine. Ukuze umhlule, kufanele uhlale ulawula izinga le-glucose futhi ulilungise ngesikhathi salo. Ukusekela lesi sikhombisi ezingeni elamukelekayo kuvumela isiguli ukuba siphile impilo ejwayelekile ngaphandle kokuzizwa sincike kulesi sifo.
Unganciphisa ushukela wegazi ngosizo lwamakhambi abantu, ukudla nemithi. Lapho ethatha isinqumo sokunciphisa ngokushesha ushukela wegazi, udokotela ubheka isimo sohlobo lweziguli kanye nesigaba sokukhula kwalesi sifo.
Izidakamizwa kuphela ezingasiza ukwehlisa ngokushesha ushukela wakho. Ezigulini zohlobo lokuqala, i-insulin isidakamizwa esinjalo.
Ziyahluka ngesikhathi sokuvezwa nesikhathi sokuqalisa kokusebenza:
Ama-insulin amafushane. Ngemuva kokudla kwabo, ushukela uyancipha ngemuva kwemizuzu eyi-10 noma ephezulu imizuzu engama-45. Izidakamizwa ezinjalo zibandakanya i-Actrapid, ejwayelekile neminye.
Ukukhishwa okuvikelwe insulin. Baqala ukusebenza, amahora ambalwa ngemuva kokuphathwa, kepha ngasikhathi sinye umphumela unikezwa usuku lonke. Lokhu kufaka phakathi: iLantus, Levemir, Protofan.
Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa ezinjalo ziyahlukahluka ngemvelaphi. Akhiqizwa kusuka kuma-enzymes e-pancreatic ezinkomeni noma ezingulubeni.
Ukuselapha ngempumelelo lesi sifo, amaphilisi ayatholakala ukwehlisa ushukela wegazi. Kaningi zisetshenziswa ekushintsheni kwesibili sikashukela.
Umuthi ngamunye othathwe ngamunye uthinta izimpawu ezithile zendlela yesifo sikashukela.
Futhi imikhiqizo ehlangene nayo iyatholakalaokuyinto ngasikhathi sinye ingaqukatha izinto ezimbalwa ezisebenzayo zezenzo ezihlukile.
Amaphilisi okunciphisa ushukela wegazi akhethiwe kucatshangelwa inkambo yesifo kanye nezimpawu zomzimba wesiguli.
Ekugcineni, kufanele kuthiwe isifo sikashukela asikwazi ukwelashwa ngokuphelele. Okusho ukuthi, ngemuva kokuxilongwa okuyikho, isiguli kumele sishintshe kakhulu indlela yaso yokuphila.
Ukulandela kuphela zonke izincomo zochwepheshe ezovumela umuntu ukuthi uhlale iyasebenza futhi uvikele izinkinga ezingaba khona. Noma yikuphi ukuphambuka emithethweni kuzoholela ekugxumeni okubukhali kushukela kuze kuyunithi engama-14, futhi impilo izophenduka esihogweni.